Caza dia mampiseho antsika amin'ny sariny "Doomsday" | Famoronana an-tserasera
Heavy Metal dia a Gazety tantara an-tsary nofinofy amerikana ary izy io dia mazàna indrindra amin'ny lohahevitra olon-dehibe izay ahitanao ny nofinofy mainty, ny siansa ary ny erotisma. Mpandala sary tena tsara toa an'i Enki Bilal, Jean Giraud (fantatra amin'ny anarana hoe Moebius), Philippe Druillet, Milo Manara ary Philippe Caza no nandalo ity gazety ity.
Ity farany ity no mamerina antsika amin'ireo tantara misy ity fanoharana antsoina hoe "Doomsday" ity izay azontsika jerena ny fanakianana lehibe sy ny fampitahana eo amin'ny tontolo maoderina ankehitriny ary izay mety hitarika antsika raha misy loza tsy ampoizina mitranga toy ny trangam-piadiana nokleary. Sary iray manokana izay ahafahantsika mankamin'ity tontolo ity natao ho an'ny lalao video Fallout 4 sy tontolo iray potika noho ny fitakiana materialista manokana ananany.
Ny fihazana dia mitondra antsika amin'ny fotoana ankehitriny sy saika maoderina ireo fikitika manokana ireo ary fomba tena manokana amin'ny endri-tsoratra hafahafa sasany, na dia tsy dia misy tsy itovizany loatra amin'ny zavatra hitantsika ankehitriny amin'ny filana ara-nofo sy kapitalista be loatra.
Ny fihazana dia manimba an'ity tontolon'ny mavokely sy plastika manodidina antsika ity avadiho ho any ambany volo izy io ary ao anatin'izany ny lelan'ny sivilizasiôna iray mandevona ny sisa tavela amin'ny vatolampy sasany izay saika nifikitra tamin'ilay silhouette izay naniry fatratra ny hafanan'ny gazy voajanahary tao amin'ny efitranony.
Toy ny amin'ny Heavy Metal, izay namoahana sarimihetsika mihetsika avo lenta, Ny fihazana dia maneho ny andro ankehitriny ary ny ho avy mety hananana an'io hery lehibe io izay midika hoe manana ny kanto an-tànana an-tànana nomen'ny asa aman-taonan'ny taona maro hatramin'ny taona 70. Mpanakanto iray ao amin'io kolontsaina tsy marim-pototra io ary izay namaritra ny kolontsaina sasany tao anaty lavaka sy tao anaty haizina.
Endrik'anarana amin'ny teny frantsay maneho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Fanoharana nataon'i Hunt momba ny "Andro Fitsarana"